Indawo Yembali Yasedolophini — Igumbi Lokulala 2 - I-Airbnb
Indawo Yembali Yasedolophini — Igumbi Lokulala 2
Igumbi lokulala elitofotofo labucala kwikhaya lembali ekwabelwana ngalo, elifumaneka ngokulula kumbindi wedolophu yaseColumbus. Eli khaya kuhambo olufutshane (imizuzu eyi-8 ukuya kweli-10) okanye uqhube (imizuzu emi-2) ukusuka kwisitalato saseWashington, esinezindlu ezininzi ezinomtsalane edolophini yaseColumbus kunye neendawo zokutyela. Eli khaya likwakumgama omfutshane ukusuka kwiiofisi ezininzi zedolophu yaseCummins, kunye neCummins Columbus Engine Plant. **Eli likhaya lesitayela samagumbi, ke uya kuba negumbi lakho lokulala labucala, kwaye wabelane ngeendawo eziqhelekileyo nezinye iindwendwe.**
Eli khaya lakhiwa ngo-1906, kwaye lisenoninzi lwemigangatho yomthi oqinileyo kunye netrim. Senze ukupeyinta kunye nokuhombisa ngokutsha ukuhlaziya ikhaya, kodwa sigcine uninzi lweempawu zembali ezenza eli khaya lahluke kakhulu. Indlu isengumsebenzi oqhubekayo, kodwa ikulungele ukukwamkela! Sisasebenza kwizinto ezimbalwa zokugqiba, ezifana nokupeyinta iindonga ezimbalwa kunye nokongeza ifanitshala engakumbi.
Indawo efikelelekayo edolophini ekufutshane neSikole esiPhakathi esiPhakathi. Ukuhamba umgama ukuya kwiindawo ezininzi ezinomtsalane edolophini kubandakanya iindawo zokutyela kunye nemivalo.
Asihlali ekhaya, kodwa sifumaneka ngomyalezo wakwa-Airbnb ukuze siphendule yonke imibuzo onokuba unayo!